By UChrisking October 22, 2021 Impilo 0 Amazwana
- Ukugeza Ubuso Okungcono Kakhulu Kwabesilisa -
Isinyathelo sokuqala futhi mhlawumbe esibaluleke kakhulu kunqubo yokunakekelwa kwesikhumba ukuhlanza. Ibeka isikhumba sakho emunxeni wezinto ezisebenzayo kulo lonke uhlelo lwakho.
Kunenqwaba yezinto zokuhlanza ubuso ongakhetha kuzo emakethe yanamuhla. Abafana, ngokuqondakalayo, bangakhungatheka. Abantu abaningi abakayijwayele i-skincare, kodwa lokho akusho ukuthi kufanele kube nzima.
Ukugeza ubuso kuyadingeka ukulwa nemiphumela yothuli, ukungcola, ukungcola, nokonakala kwelanga esikhunjeni.
Ngaphezu kwalokho, ukuhlanzwa kobuso besilisa okuhloniphekile kuzosusa uwoyela nokungcola esikhunjeni sakho, kukushiye uzizwa uhlanzekile futhi uvuselelwe.
Ngakho-ke, uma uchitha isikhathi esiningi ngaphandle, kubalulekile ukuhlanza ubuso bakho ukuze ugweme ukulimala othulini nasezintweni ezingcolisayo.
Isinyathelo sokuqala futhi mhlawumbe esibaluleke kakhulu enqubweni yokunakekelwa kwesikhumba ukuhlanza. Futhi, yenza isikhumba sakho sibambe izingxenye ezisebenzayo kulo lonke uhlelo lwakho.
Ukuqonda okudingwa isikhumba sakho kuyisihluthulelo sokukhetha ukugeza ubuso okungcono kakhulu kwabafana. Mhlawumbe ufuna i-hydration, noma mhlawumbe ufuna ibhalansi.
Futhi, kukhona ukwakheka kwalo lonke uhlobo lwesikhumba eziphatha izingqinamba ezithile. Kukhona ongakhetha kukho kungakhathalekile isimo sakho sezezimali.
Lesi sihloko sizokusiza ekukhetheni ukugeza ubuso okuhle kakhulu kwabafana, kungakhathaliseki ukuthi unesikhumba esinamafutha noma esinezinduna.
Yini okumelwe siyibheke
Ngaphambi kokugijimela ukuthola ukugeza ubuso okuhle kakhulu kwabesilisa; ngezansi yilokho okufanele ukucabangele:
1. Amafomula Aqondile Wohlobo Lwesikhumba
Ukugeza ubuso obuhle kakhulu kuwe kunqunywa uhlobo lwesikhumba sakho. Isibonelo, uma uhlushwa izinduna, kufanele ufune ukwakheka okuqukethe izinto zokulwa nezinduna njenge-salicylic acid noma igxolo lomzane.
Amafutha okuthambisa nokwakhiwa kwe-creamier kungaba kuhle esikhunjeni esomile. Abanye abahlanza ubuso bangasiza ekulweni nezimpawu zokuguga, ngenkathi bengahle baklame ngokukhethekile abanye besikhumba esibucayi.
Hlola amalebula alezi zimangalo ezisebenza kuzidingo zakho ezihlukile.
2. Hydrating Izimfanelo
Njengoba ukugeza ubuso, naphezu kwemizamo yakho emihle, kungase kususe amanye amafutha emvelo esikhumba sakho kanye nomswakama, kubalulekile ukukhetha umkhiqizo onezinto zokuthambisa ukuze ulwe nokoma.
Nokho, kunezinketho ezimbalwa ezitholakalayo kuye ngohlobo lwesikhumba sakho kanye nezimfuno. Uwoyela, okhilimu, nebhotela kungase kube yinzuzo ezinhlotsheni zesikhumba ezomile, kuyilapho amajeli, i-glycerine, ne-hyaluronic acid ingase ibe yinzuzo ezinhlotsheni zesikhumba esinamafutha.
3. Izithako Ezingahlubuki noma Ezicasulayo
Umgomo wokugeza ubuso uwukuqeda ukungcola, amagciwane, ukungcola, namaseli esikhumba afile. Ngenkathi ugcina ibhalansi yemvelo yesikhumba sakho kanye nomswakama.
Abasebenza ngokungemthetho ekuhlanzweni kobuso kuncibilika emanzini futhi kusize ekususeni imfucumfucu namafutha esikhunjeni.
Kodwa-ke, amanye ama-surfactants, akhumula kakhulu kunamanye. Ama-Surfactants angabopha i-keratin futhi akhiqize i-protein denaturation, abangele ukulimala kwe-keratinocyte cell membrane.
Ama-sulphate, okuvame kakhulu kuwo yi-sodium lauryl sulfate, yizinto ezimbili ezisebenza ngokuzivikela ezifanele ukugwenywa.
Okuhamba phambili Okuhamba phambili kobuso kwabesilisa
Njengoba kunezinhlobo eziningi zokuhlanza ubuso zamadoda emakethe, kufanele ukhethe eyodwa efanele uhlobo lwesikhumba sakho. Ngezansi kunohlu lwe-Best Best Wash Wash Yamadoda:
1.Guqula i-Organic Beauty Daily Detox Wash Wash
Lokhu kwenze uhlu lwendawo yokugeza ubuso enhle kakhulu yabesilisa.
Uma ufuna okokuhlanza ubuso okushibhile okhulile ngezithako zemvelo, lokhu okuyisisekelo kobuhle obuluhlaza kunakho konke. Lokhu kuhlanza ubuso ithi ibhalansi yesikhumba ngenkathi ikhipha ngobumnene ama-enzyme we-papaya.
Futhi, umkhiqizo unesenzo esimnene esinamagwebu kepha awusomi isikhumba. Lokhu kuhlanza kufanelekile kuzo zonke izinhlobo zesikhumba, kepha kuhle kakhulu ekuhlanganiseni isikhumba.
2. I-Paula's Choice Skincare Defense I-Hydrating Gel-to-Cream Cleanser
Lokhu cleanser, okuyingxenye Uhla lwezokuvikela lomkhiqizo, uthembisa ukunqanda ukungcoliswa kwesikhumba.
Futhi, kungasiza ngokulimala kokukhanya okuluhlaza okwesibhakabhaka okubangelwa ukuchayeka njalo ezikrinini zefoni nezekhompyutha. Kuyinhlanganisela emnene esusa amafutha angaphezulu nokungcola.
3. Clarins Velvet Ubisi Lokuhlanza
Lokhu futhi kwenze uhlu lwendawo yokugeza ubuso enhle kakhulu yabesilisa.
Kwesinye isikhathi baqoqa isikhumba esomile nesizwelayo ngesizathu esihle: bobabili basabela kabi emikhiqizweni eminingi “evamile”, bayishiye yomile noma ivuvukele.
Futhi, lolu bisi lokuhlanza iyisihlanzi esinamandla esisusa ukungcola nokungcola sibe sishiya isikhumba simanzi.
4. I-Kiehl's Calendula Deep Cleansing Foaming Face Wash
KaKiehl isebenzise izimfanelo ezondla kakhulu nezithambisa isikhumba ze-calendula, imbali enjenge-herbaceous marigold edabuka eMedithera, njengesithako kusukela ngeminyaka yawo-1960s.
Ngaphezu kwalokho, lesi sihlanzi esingenansipho nesisebenza kahle kakhulu esinamagwebu esinokukhishwa kwe-calendula sigcwalisa ngempumelelo, sithambisa, futhi sithambisa isikhumba ngaphandle kokususa amafutha emvelo.
Ukusenza silungele isikhumba esibucayi kepha sifanelane kangcono nezinhlobo zesikhumba esinamafutha nesijwayelekile.
Uma yenziwe yasebenza ngamanzi, ukuthungwa kwejeli okukhilimu kushintsha kube igwebu eliwugqinsi, okushiya isikhumba sivuselelwe, sinamandla, futhi sibukeke sengathi uke walala ubusuku bonke.
Futhi, izixazululo zikaKiehl's calendula skincare ziyingxenye yebanga elikhulu lokunakekelwa kwesikhumba le-calendula elisebenzisa lesi sithako se-botanical super (esibuyela emuva ekhulwini le-12).
Lokho ekuqaleni kwakusetshenziswa emakhemisi endabuko aseChina. I-230ml ibiza u- £ 25.50.
5. I-Horace Purifying Face Cleanser
Indlela engenamqondo nokungaxabani kule nkampani yaseFrance enesabelomali iyakhanga impela.
Omunye wemikhiqizo yawo ethengiswa kakhulu ukugeza ubuso. Lihlanza isikhumba futhi lilawula nge-sebo, okusho ukuthi lisiza ukulawula ukukhiqizwa kukawoyela.
Yakhiwe ngamaphesenti angama-99 izingxenye zemvelo, okuhlanganisa namalahle aseJapane acushiwe, i-yuka, i-aloe vera, i-zinc PCA, ne-glycerin ethathwe esitshalweni.
Futhi, umuzwa wayo oqabulayo, onika amandla futhi ungasiza ukuqala usuku, ikakhulukazi uma uqala ku-hangover. Ilungele zonke izinhlobo zesikhumba futhi ayinayo i-paraben. £11 ngebhodlela elingu-200ml.
6. INivea Men Oil Control Konke ku-1 Face Wash
Lokhu kuhlanza ubuso kukhuluma ngezinkinga ezahlukahlukene, kufaka phakathi amabala amnyama, izinduna namafutha amaningi.
Inqubo yayo yokuhlanza ukulawula uwoyela ngemisebenzi eminingi ishiya isikhumba sakho sizizwa sibushelelezi, sivuselelwe, futhi sihle.
Ngaphezu kwalokho, udaka lwayo olupholile luhlanza futhi luqede amafutha amaningi kanye nokungcola okuvela ezimbotsheni. Isenzo sayo sokuhlanza ngokuphelele sinciphisa futhi sivimbele ama-blackheads namhlophe.
Ngenxa yalokhu, inikeza isenzo sokulawula uwoyela esihlala isikhathi eside. Kuyasiza nokuvikela nokwelapha izinduna. Futhi, inhlanganisela yodaka olupholayo (equkethe amalahle emvelo) iyahlanza futhi isuse uwoyela owedlulele nokungcola ezimbotsheni.
Ukwengeza, inesenzo esihlala isikhathi eside sokulawula uwoyela. Futhi ivimbela futhi inciphise izinduna, ikhanyise isikhumba. Futhi, iqeda izindawo ezimnyama ezibangelwa ukungcola. Ukwengeza, ogwini, kuyaqabula futhi kuyabanda.
7. Nivea Men Dark Spot Ukunciphisa Ubuso Geza
Lokhu ukhilimu kususa kahle izindawo ezimnyama futhi ithuthukise ukubukeka nokuzizwa kwesikhumba. Isusa ukungcola namafutha amaningi ngenkathi inciphisa amabala amnyama abangelwa ukungcola nezinsalela.
Ngenxa yalokho, igeza ngokujulile isikhumba esimhlophe.
Ukungcola namafutha angadingekile kuyasuswa.
Ihlanza ngokujulile isikhumba esimhlophe
Ilawula uwoyela kuze kufike emahoreni ayi-12.
8. (MALIN+GOETZ) Isihlanzi Sobuso SeGrapefruit
Ngenkathi kunjalo ilungele zonke izinhlobo zesikhumba, sisebenza ikakhulukazi esikhunjeni esinamafutha. Uzothola ukuhlanzwa ngokuphelele okungakushiyi uzizwa umile. Lesi isihlanzi esinamagwebu esingenawo amakhemikhali anokhahlo.
Ukukhishwa kwe-Grapefruit kanye nama-amino acid kuhloswe ukusiza ukugcina ukulingana kwesikhumba. Zingafaka lokhu kuzindlela zakho zosuku noma zakusihlwa.
9. I-Kiehl's Facel Fuel Enizing Energy Wash
I-Facial Fuel kaKiehl yenzelwe ukunika amandla, ngakho-ke iqukethe i-caffeine ne-vitamin E menthol.
Lesi sihlanzi, njengawo wonke ulayini wamafutha obuso (okuyindawo ekahle yokuqala kunoma yiluphi uhlobo lokunakekelwa kwesikhumba kwamadoda), siklanyelwe ukuvusa isikhumba esibukeka sikhathele kuyilapho ngesikhathi esifanayo silungiselela ukushefa okusilika okubushelelezi. £19.50
10. Imbewu ye-Aesop Parsley yokuhlanza ubuso
Umugqa ofakwe imbewu ye-parsley okwenziwe kusuka ku-Aesop uhlelo lokunakekelwa kwesikhumba olufaneleke kakhulu kumasethingi angcolisiwe nakwamadolobha amakhulu, ngenxa yezakhi ezithuthukisiwe ze-antioxidant zesithako.
Kungokwemvelo ukuthi ukuhlanzwa kophawu lwentengiso ye-franchise kungukugeza ubuso okusebenza kanzima futhi okuphumelela ngokweqile okungaphatha uwoyela nokungcola.
Kuyisixazululo sejeli esithambile esithambile ngokumangalisayo ekusebenzeni kwaso.
Ukwakheka kwayo kwemvelo (ngaphandle kwembewu ye-parsley enothe ngamavithamini) iqukethe impande ye-liquorice, i-anti-inflammatory esiza ukukala ithoni yesikhumba. Kanye ne-blackcurrant seed oil, elusizo esikhunjeni esijwayelekile, esihlanganayo, nesiphazamisekile.
Izinto ezimangalisayo okufanele zenziwe eCalifornia
11. IJaxon Lane Enzyme Powder Face Wash
Abahlanzayo abawona wonke amanzi. Ukwenza i- i-lather exfoliating ethambile, hlanganisa amaconsi ambalwa amanzi nale mpushana phakathi kwezandla zakho.
Iqukethe ama-enzyme ezithelo (asuka kuphayinaphu kanye ne-papaya) asusa isikhumba esifile futhi aveze ibala lakho elikhanyayo kakhulu. Kanye namavithamini C, E, B3, no-B5, asebenza ndawonye ukuze akwenze ube nebala elithambile, elibushelelezi nelikhanyayo.
12. Uhlu lwe-Inkey Salicylic Acid Cleanser
Uhlu Lwezinkinobho, eyasungulwa u-Mark Curry no-Colette Laxton kanye namazinga emboni ayinselele.
Ifuna ukususa izendlalelo ze-jargon nobunkimbinkimbi ekunakekelweni kwesikhumba ngezisombululo eziqhutshwa yimiphumela eziqukethe izithako ezisebenza kanzima nezokudala ngebanga lentengo elithengeka kakhulu (yonke into ingaphansi kuka-£15).
Ngomkhiqizo owodwa we-Inkey othengiswa njalo ngemizuzwana engama-30, umqondo wenkampani wokugcina amanani entengo aphansi ukuze amakhasimende azame izinto ezintsha kuyakhanya ngokusobala.
Inkampani ephayona iphinde ibeke izinto ezisebenza kahle kakhulu (njenge-retinol noma i-hyaluronic acid) ngaphambili futhi igxile ephaketheni layo ngeqoqo eliholwa yizithako.
Lesi sihlanzi sobuso siqeda kahle ukungcola futhi sivule izimbotshana ukuze kwehliswe ukubukeka kwezimbotshana ezikhulisiwe futhi silawule uwoyela oweqile ngo-2% salicylic acid, i-beta hydroxy acid (BHA) enamandla.
I-BHA iyi-exfoliant yamakhemikhali elinganiselayo ehambisana nengxenye ye-zinc ukusiza ukunciphisa ukukhiqizwa kwe-sebum ne-allantoin, enezinto ezilwa nokucasula nokuvikela.
Ilungele kangcono i- izinhlobo ezijwayelekile zesikhumba esinamafutha.
Lesi sixazululo esingomisi, esinamagwebu okukhanya silungele wonke umuntu ophethwe izinduna noma amakhanda amnyama futhi angasetshenziswa imini nobusuku. I-150ml ibiza u- £ 10.99.
13. Ijeli yokuhlanza uSusanne Kauffman
Lena ukukhetha okuhle kakhulu kuzo zonke izinhlobo zesikhumba, kepha ifaneleka kakhulu ukuhlanganiswa nesikhumba esinamafutha.
Kuyaziwa ngama-celebs, kepha kungaphezu kokumane nje ube yinsini.
Yenziwe ngamakhambi e-alpine nezinto ezibolayo ukuze zikunikeze ukuhlanzeka okuthambile. Lokhu kuhlanza kuhle ekwelapheni ukuqubuka okuncane nokucasuka.
14. ICetaphil Gentle Daily Scrub
Kulula ukulahla ukunakekelwa kwesikhumba okukhiqizwe ngobuningi, kodwa ngokuvamile ukukhetha okonga kakhulu nakho kuba okuyisisekelo futhi kusebenza ngempumelelo.
Hlanza ekuseni, kusihlwa, nangemuva kwejimu ngalokhu I-hypoallergenic foamy yokuhlanza, engenazo izinsipho nemibala.
Lesi yisitolo esisodwa sezitolo ezingeke sikushiye uzizwa umile.
15. UDkt Jart Cicapair Tiger Grass Enzyme Foam Cleanser
Uma ufuna ukunakekelwa kwesikhumba okunobuciko, okungenazingxabano, nokulungisa, ungaqhubekeli phambili UDkt Jart, umkhiqizo wobuhle waseKorea.
Bangeze izindawo ezithobisayo zotshani bengwe kububanzi obudumile benkampani iCicapair, uhlobo lwemikhiqizo ehloselwe ukuthambisa ukubonakala kwesikhumba esivele sicasuke kalula.
Ukungcola, ukushintsha kwesimo sezulu, ukuntuleka kokulala, ngisho nendawo ezungezile eminyene kungabangela ukuncipha komgoqo womswakama wesikhumba.
Uma wengeza izinqubo zokuhlanza isikhumba ezinokhahlo nezinamandla kungxube, izinto zingase zibe zimbi kakhulu.
I-enzyme yokuhlanza ubuso bukaDkt Jart's Cicapair ithuthukiswe njengesihlanzisi esinamagwebu esinobumnene obukhulu ngalokhu engqondweni.
Imnene ngokwanele ukusetshenziswa kwansuku zonke, ngisho nasemiphefumulweni ezwela kakhulu, ene-glycerin ethambisa kakhulu, enomgomo wokupholisa, ukuphumula, nokubuyisela isikhumba ekusebenzeni okuhle kakhulu.
Kuhlanganisa ne-Cicabond, inkimbinkimbi yokugcwalisa umswakama. Futhi i-Jartbiome, isithako sikaDkt. Jart esikhethekile se-probiotic ferment (esebenzisa ubuchwepheshe obusha be-microbiome obuvela e-Korea) ukulinganisa isikhumba futhi kuqinise umgoqo waso wemvelo womswakama.
Clarins' iqoqo elenziwe kabusha labahlanzi abangochwepheshe (bayisikhombisa sebebonke).
Futhi ama-toner enziwa enezinhlobo ezahlukahlukene zesikhumba engqondweni futhi asebenzisa amaphesenti ayi-100 wezithako zemvelo ezitholwe ngqo epulazini lomkhiqizo le-Alpine naselabhorethri yomoya ovulekile (Le Domaine Clarins).
Etholakala endaweni ephakeme ngamamitha angu-1,400 e-French Alps futhi ayinakho ukungcola emoyeni noma emhlabathini.
Lokhu kuhlanza ubuso nge-mousse, okucebile futhi okugcoba amagwebu kuhlanza ngokujulile ngenkathi kusekelwa i-microbiome yesikhumba enempilo. I-Gentle Complex, inhlanganisela yemifino ye-Alpine engamaphesenti angu-100 epholisa futhi ethulisa isikhumba, isungulwe nguClarin.
Ukwengeza ukuvuselelwa, kuhlanganiswe ne-pair enamandla yezitshalo ezitshaliwe: i-organic golden gentian ne-organic lemon balm.
Ukusiza ukuhlonipha izitshalo zemvelo zesikhumba, kwakhethwa insipho yemvelo, insipho yesitshalo enamandla okukhihliza amagwebu emvelo, kanye nama-saponins, asebenza njengama-ejenti okuhlanza emvelo, akhethiwe.
Ikona ilungele zonke izinhlobo zesikhumba, imnene ngokwanele ukusetshenziswa nsuku zonke, futhi izoshiya ibala lakho libukeka licwebezela futhi likhazimula.
Bayicebisa ngezingcaphuno ze-tamarind pulp-equkethe i-AHA ukuze ikhiphe kahle isikhumba-futhi ifanele zonke izinhlobo zesikhumba, imnene ngokwanele ukusetshenziswa nsuku zonke, futhi izoshiya ibala lakho libukeka likhanya kakhudlwana.
17. I-Alchemist Ekhulile iHydra+ Oil-Gel Facial Cleanser
Akukaze kusheshe kakhulu ukulwa nezimpawu zokuguga esikhumbeni sakho. Umphezulu wageza ngobumnene ukungcola ngalokhu i-gel yokuhlanza ubisi.
Inenombolo ende yezakhi, kufaka phakathi i-squalane nezinhlobonhlobo zama-antioxidants nama-fatty acids, konke lokhu kungasiza ukunciphisa ukubonakala kwemigqa emihle nemibimbi.
Iphinde ifake amanzi emzimbeni, okusiza ekugcineni isikhumba esinempilo, esikhanyayo.
18. Isitolo Somzimba Aloe Cream Cleanser
I-Aloe imanzisa futhi ipholise ubuso kulokhu okuhlanza okuhlukahlukene, okunokhilimu. Kungumphelelisi omuhle kakhulu enkambisweni yakho yokunakekelwa kwesikhumba ngemuva kosuku oluchithwe elangeni.
Ngisho noma yakhelwe ubuso (okuyinto ezwela kakhulu kunomzimba wonke), ingase isetshenziswe nakwezinye izindawo ezishiswe yilanga.
19. INivea Men Deep Impact Face ne-Beard Wash
Ikhabhoni emnyama eqinile yokuhlanza ubuso ihlanza kahle isikhumba sakho nezinwele zentshebe. Ijula ihlanza isikhumba, isuse ukungcola, insila, namafutha amaningi. Ukubunjwa kwayo kuqinisekisa ukuthi isikhumba sizizwa sihlanzekile futhi sivuselelwe ngaphandle kokuba some kakhulu.
Lokhu kugeza ubuso nentshebe kusiza ekususeni ukungcola. Futhi, lokhu kugeza ubuso nentshebe kuhlanza isikhumba sakho ngokukhipha amafutha engeziwe kanye nemfucumfucu.
20. Umkhuba omubi Vusa Izinto Up Macha & Mint Daily Cleanser
Imikhuba yethu emibi ingase ibe nomthelela omubi empilweni yesikhumba sethu.
Isikhathi esiningi sesikrini, ukudla ukudla okulula, nokungalali ngokwanele yizibonelo ezimbalwa nje.
Umkhuba Ombi, inkampani ye-hybrid skincare-Wellness ezinze eLos Angeles. Futhi eholwa inxusa lomkhiqizo womhlaba wonke, umqondisi wokudala, kanye nomgqugquzeli omkhulu u-Emma Chamberlain badalelwe ukuhlehlisa umonakalo owenziwe izenzo zethu zokunganaki.
Umkhiqizo uhlinzeka ngobuningi bezisekelo zokunakekelwa kwesikhumba nsuku zonke nezixazululo ezisheshayo eziqondisiwe, ikakhulukazi ezenzelwe ukwehlisa isikhumba esicindezelekile nokuqeda ukuvuvukala, futhi iyintandokazi phakathi kweGen Z ethambekele emqubeni kanye neminyaka eyizinkulungwane.
Uphawu lokuhweba lwalolu hlobo i-Wake Things Up face wash luyi-pH ebhalansile, isihlanzi sasekuseni esingahlubuki.
Isicoci esiqabulayo esenziwe amagwebu sigcwele izithako ezisebenzayo kuhlanganise detoxifying matcha green tea (enikeza isikhumba umfutho wokulwa ne-antioxidant) kanye ne-moisturizing aloe vera (eshiya isikhumba sithambile futhi sibushelelezi).
Kanye nenhlanganisela yeminti ne-neroli amafutha abalulekile ukuvusa izinzwa. Inika amandla futhi inikeze ukuhlanzeka okujulile ngaphandle kokubangela ukucasuka. Ilungele zonke izinhlobo zesikhumba, ayinayo i-sulfate, futhi iyi-vegan.
21. I-Urban Skin Rx Ibha Yokuhlanza Isikhumba Esicacile
Lokhu isihlanza sokwelashwa idumile phakathi kwalabo abanesikhumba esimnyama. Futhi bakwenzela ukubhekana nokukhathazeka okubandakanya isikhumba esinamafutha nezwi elingalingani.
Iphinde ikhiphe futhi ingasetshenziswa njengesifihla-mzuzu semizuzu emihlanu; izithako ezisebenzayo njenge-niacinamide ne-salicylic acid zisiza ukukhulisa ukubukeka kwesikhumba ngokuhamba kwesikhathi. Kodwa-ke, ukuze kusetshenziswe kalula futhi kugcinwe, ibha ifakwa embizeni.
22. I-Neutrogena Ultra Gentle Cream Face Cleanser
Kunokuba kukhishwe amaseli esikhumba afile avala izimbotshana, amaningana ukukhipha abahlanzayo sebenzisa i-salicylic noma i-lactic acid ukuze uwancibilikise.
Futhi, lena inqubo yobuchwepheshe, kepha uma unesikhumba esibucayi, sigweme.
Esikhundleni salokho, sebenzisa ukukhuhla okungokomzimba okulula, okufana nokukhuhla, okuhlanganisa izinqubo ezimbili zokunakekelwa kwesikhumba zibe yinto eyodwa (ukuze isikhumba sakho sibekezelele ingxenye yobunzima). Uma uyihlikihla ngobumnene, kuzobe kuphephe ngokuphelele ukuyisebenzisa njalo.
23. I-Garnier Men Face Geza Amandla Amhlophe Isenzo Esiphindwe Kabili
Ukugeza ubuso kukaGarnier okokuqala ngoba amadoda enzelwe ukuqeda uthuli nezinto ezingcolisa umzimba kuyilapho enikeza isikhumba ukubukeka okuhle.
Bengeze i-salicylic acid ne-vitamin C ku-recipe ukuze bakhiphe isikhumba sakho emnyombweni futhi basuse ubuthuntu. Ihlanza ngokujulile futhi iqede amafutha.
Futhi, i-salicylic acid ne-vitamin C yaziwa ngokukhipha futhi yehlise ubuthuntu esikhumbeni, ngokulandelana. Ukwengeza, ihlanza ngokujulile isikhumba, iqede uwoyela, insila, nezinto ezingcolisayo. Ngemuva kwalokho, isikhumba sivela ngokugqamile, sikhanye, futhi sisha usuku lonke.
24. Ozidelayo Ngu-Hyram Centella & Green Tea Daily Gel Cleanser
Lo mugqa omusha wokusebenzisana wokunakekelwa kwesikhumba ovela ku-Inkey List (okuqhutshwa yisayensi, izithako ezingabizi kakhulu). Futhi super-skinfluencer Hyram Yarbro usezinhlosweni zokuvusa ushintsho kwezenhlalo ngokusebenzisa ipulatifomu yakwaYarbro (enabantu abayizigidi eziyi-12 abalandelayo) ukuqwashisa nokuxhasa izinhlangano ezithintekayo kuzo zozine izigaba.
Kodwa-ke, uhla lwemikhiqizo emnene kodwa esebenzayo yokunakekelwa kwesikhumba nayo esethelwe ukuvuselela inqubo yakho yokuzilungisa. Futhi, ukusetshenziswa kwansuku zonke, ukugeza ubuso be-gel-textured kuyaswakamisa futhi kuhlanza ngokujulile yonke iminyaka nezinhlobo zesikhumba.
Ngaphezu kwalokho, yenziwe nge-antioxidant egcwele i-5% Green Tea Complex ukuzola nokunciphisa ukubomvu. Ne-3% Centella Asiatica Complex yokuthambisa isikhumba.
Kodwa-ke, ngamaphesenti angu-14.5 e-glycerin emanzisa i-glycerin esixazululweni esinokulinganisela kwe-pH, ngaphandle kokumisa noma ukuncisha isikhumba umswakama obalulekile.
Futhi, ayidli inyama, ayinasundu, futhi zonke izinto zokuhlanza ezithengiwe zisiza ukulwa nokushintsha kwesimo sezulu ngokulondoloza amahlathi ashisayo ekubhujisweni, ngenxa yokubambisana ne-Rainforest Trust.
25. Isikwele Esine-Superfluid One One Gentle Cleanser
Umgomo walolu hlobo lwesizukulwane esilandelayo sohlobo lwe-unisex, olwakhiwe ezindaweni zesikhumba ezisekelwe kwisayensi e-Italy, ukwenza ukunakekelwa kwesikhumba kube lula, kujabulise, futhi kungabi nengcindezi.
Kodwa-ke, isiphetho salo mugqa olandelayo we-unisex yisikhumba esinempilo, hhayi isikhumba esingenasici. Ngakho, ngombono wokuthi ubuhle abukho mayelana nokuhlangabezana nemibandela engenakwenzeka.
Okungaphezulu kakhulu unaka lokho amakhasimende ayo akufunayo. Yonke imibuzo ye-DM, ukuphawula, ukuphendula, ne-Instagram iyabhekwa lapho kwenziwa umkhiqizo omusha.
I-Square One Gentle Foam Cleanser, isihlanzi esisha sobuso senkampani, sidlule ezivivinyweni zelebhu ezingaphezu kuka-50 kanye namasheke wekhwalithi angu-200 ngaphambi kokuba iqembu linqume ukuyikhulula.
Futhi, iqukethe i-chamomile ekhishwe ukunciphisa ukuzwela kanye ne-niacinamide (uvithamini B3). Ukuthambisa ngenkathi ugcina umgoqo wesikhumba, kanye nokuthulisa i-vitamin E, i-antioxidant evikela amangqamuzana esikhumba kuma-radicals mahhala.
Isihlanzi sansuku zonke esinokukhanya, okunegwebu elithambile lokho iqeda kahle ukungcola nokungcoliswa kwezinhlayiya ezincane lokho kuphazamisa i-microbiota yethu.
Okuholela esikhumbeni esibuthakathaka, izimbotshana ezinwetshiwe, nokoma. Ifanele wonke umuntu, ngisho nalabo abangezwani nokudla, kanye ne-vegan ngokuphelele.
26. I-Boscia Ikhipha Ubuthi I-Black Charcoal Cleanser
Lokhu ukufudumeza isihlanza ijeli kungenye inketho enhle kakhulu yabafana abanesikhumba esinamafutha. Isebenzisa amalahle ukuhlanza kahle, ukulinganisela, nokunciphisa ukubonakala kwama-pores.
Singayisebenzisa futhi ngokuhlanza okuphindwe kabili. Le vegan futhi ayinalo iphunga lokufakelwa, njengeminye imikhiqizo yeBoscia.
27. Amaseli eGarnier Power Power White Anti-Dark Sellness Face Wash
Ngokuqeda ukungcola, ukungcola, namaseli amnyama afile, IGarnier Men Fairness FaceWash kukhanya isikhumba ngokusobala. Isixazululo sayo sokulwa nokungcola, okubandakanya amanzi amagilebhisi e-anti-oxidant, asusa ukungcola kanye nokungcola.
Futhi, iqeda amangqamuzana amnyama afile futhi ikhanyisa isikhumba ngokumangalisayo ngenxa yokusetshenziswa kwe-lemon ekhanyayo kanye nobuhlalu obupholile obuncane.
Ngokwengeziwe, i-Anti-Oxidant Grape Water isetshenziselwa ukwenza lesi siphuzo. Futhi, ukungcola kanye nokungcola kuyasuswa. Kodwa-ke, ukukhishwa kukalamula kusiza ukuqeda amaseli amnyama afile esikhumba.
28. IGarnier Men Acno Fight Face Wash
IGarnier Acnofight ilwa ngempumelelo nezimpawu eziyisithupha zomqubuko. Ukuphathwa kahle kwamafutha, lesi sixazululo siqukethe izingxenye zemvelo.
Nokho, ngenxa yalokho, isikhumba sakho sihlala sihlanzekile, somile, futhi sisisha. Ama-Micro-beads akhipha isikhumba, asuse amakhanda amnyama, futhi ahlanze izimbotshana ezivalekile.
Lezi zingxenye zemvelo azigcini nje ukunciphisa ukukhishwa kwamafutha kodwa futhi zivuselela futhi zibuyisele isikhumba sakho. Kuhlanganisa i-salicylic acid, ene-antibacterial kanye nemiphumela yokuhlanza.
Ezinye I-Salicylic Actives & Izinzuzo Zokulungisa I-Herba. Futhi, inokulawulwa kwamafutha okususelwa ku-Gel. Futhi isebenza kumaPimples omile
Futhi, ama-blackheads ayasuswa, futhi ama-pores ayaqiniswa. Futhi ikhanyisa Amamaki futhi Yehlisa Ububomvu
29. I-Acqua Di Parma Barbiere Daily Wash Wash
I-Acqua Di Parma, ibhizinisi le-cologne yesi-Italian eyingcweti elasungulwa ngo-1916. Imisa ibha phezulu ngamakha ayo aphambili, ukusebenzisana okuyingqayizivele okufunwe ngemva kwalokho, kanye nezinqubo ezipholile.
Lokhu kugeza okuvuselelayo kungenye yezengezo ezimbili ezintsha ohlwini lwe-ADP's Barbiere lobuso, ukushefa, intshebe, nemikhiqizo yokunakekela izinwele. Okuhloswe ngayo kwabesilisa futhi kugqugquzelwe amasiko okugunda ase-Italy.
Futhi, inophawu lokuhweba lwephunga elithi Colonia, elinikeza umuzwa osheshayo wokunethezeka nobusha.
Ukwakheka okuncane kufanelekile kuzo zonke izinhlobo zesikhumba futhi kwenzelwe ukusetshenziswa kwansuku zonke. Kususa ngempumelelo ukungcola, ukungcola, nokungcola ngaphandle kokulimaza noma ukomisa isikhumba.
Eqinisweni, ifaka amanzi esikhumbeni kuze kube amahora ayisithupha ngemuva kokufakwa. Okuhle empilweni yesikhumba jikelele kodwa akusona isizathu sokweqa okokuthambisa.
Amafutha embewu yethanga kanye ne-D-panthenol (kokubili okumanzisa ngokweqile), i-elderflower extract (okuyi-astringent futhi evuselelayo), kanye nokuvuselela i-rosemary ekhishwe konke kusebenza ndawonye ukwenza izimbotshana zibonakale zizincane futhi okusanhlamvu kwesikhumba kubukeke kucwengekile.
Lapho ihlanganiswe ne-new I-Multi-Action Day Cream, lokhu kulula ukukusebenzisa, ukuthungwa kwegwebu okukhilimu ukuya-kuthambile kubhekisela endleleni eyenziwe lula yokuzilungisa kwansuku zonke kusukela kulo mkhiqizo wakudala kodwa ocabanga phambili. I-100ml ibiza u- £ 28.
Izilwane ezinqamule kakhulu
30. Ukubuyekeza I-Skincare Gentle Cleansing Lotion
UDkt Heather Rogers we I-Dermatology yesimanje, omunye wodokotela engibathemba kakhulu ngezincomo zomkhiqizo, uncoma i-lotion yokuhlanza emnene ye-Revision ezigulini eziningi ezinesikhumba esibucayi.
Iphakamisa uwoyela nge-apula amino acid ngaphambi kokupholisa kanye nokuthambisa nge-chamomile kanye ne-algae extracts.
31. I-L'Oreal Paris Isazi Samadoda Esimhlophe Sokukhanyisa Igwebu
I-Men's L'Oreal Expert White Activ igwebu elinamandla kakhulu mhlophe ukwakheka okwehlukile okusiza abesilisa ekususeni amangqamuzana esikhumba afile, kushiye ibala labo likhazimula futhi likhanya.
Le lotion iphinde ikhuthaze ukuqedwa kwamaseli esikhumba afile. Ihlanza isikhumba futhi isenze sibonakale sikhanya ngokususa konke ukungcola.
Futhi, inohlelo lokuzivikela olusebenzayo. Futhi lesi isithako esisebenzayo esipholile esiza ukuqinisa ukumelana nemvelo kwesikhumba kubahlaseli bansuku zonke, okuholela ekunciphiseni kokuqina nokunethezeka okukhulu.
Futhi, ukukhishwa kwayo kwe-Pro kungumenzeli oqinile wokuxebuka. Kuyasiza ukushelela ngaphandle ukungapheleli ebusweni besikhumba futhi kukhuthaze ukuqedwa kwemvelo kwamangqamuzana esikhumba afile.
Ukwengeza, iqinisa izivikelo zemvelo zesikhumba. Futhi ngobumnene uhlanza futhi ukhanye ngokushesha isikhumba. Futhi, ikhanyisa ibala usuku nosuku
32. I-Caudalie Micellar Amanzi Okuhlanza
Amanzi we-Micellar ingase ibonakale kuwe uma okwamanje uyisebenzisela ukuhlanzwa kabili.
Kuyingxenye ebalulekile yendlela yokunakekela isikhumba enezinyathelo eziningi. Izinsalela zomkhiqizo, insila, namafutha konke kungase kususwe ngalesi sihlanzi esingahlanzisi.
Inhlanganisela yamanzi yamagilebhisi, i-chamomile, ne-glycerin evela ku-Caudalie ithi ivuselela isikhumba kabusha. Ngobuhle kanye ne-aficionados yesikhumba, la manzi e-micellar kufanele abe nawo.
33. Izindwangu zeFulton & Roark ngemuva
Lezi zindwangu, okuyi- i-half cleanser ne-part toner, bhalansisa kahle isikhumba ngemva kokushefa ngakunye. Amafutha esihlahla setiye kanye ne-witch hazel asetshenziselwa ukubulala amagciwane futhi ahlanze izimbotshana, kuyilapho i-eucalyptus isetshenziselwa ukudambisa ukuzwela.
Noma ungagundi, ungabayisa ejimini noma uyonikezwa ukudla kwasemini.
34. I-Ultra Facial Facial-Free Cleaner ye-Kiehl
Lesi sihlanzi sansuku zonke esinika amandla, esicisha isikhumba kusuka KaKiehl iyisixazululo esishukumisayo, esingenawo uwoyela esidalwe ukubhekana nezinkinga ezibangelwa ukukhiqizwa kwe-sebum ngokweqile.
Futhi, isusa kahle ukungcola, uwoyela, nokungcola ngaphandle kokukhumula, ukomisa, noma ukulimaza i-epidermis. Futhi kufanelekile ezinhlotsheni zesikhumba ezinamafutha.
Futhi, inomumo wejeli olula, ubuchwepheshe begwebu elisheshayo, futhi ifakwe ezintweni ezimbili ezibalulekile ze-botanical: isitshalo sasogwadule kanye nenhlaba.
Ukukhishwa kwezithelo zikalamula, okunamandla ku-vithamini C futhi okwaziwayo ukuthi kunemiphumela ethinta izindlebe futhi kufaka inani eliphakeme le-potassium ye-hydration esheshayo neyesikhathi eside.
Kodwa-ke, izokwehlisa ngokusobala uwoyela omningi ebusweni besikhumba lapho isetshenziswa ekuseni nasebusuku, isishiye siqabulekile futhi silinganisiwe. Imnene ngokwanele ukuyisebenzisa nsuku zonke futhi ilungele isikhumba esibucayi. Ngo-150ml, intengo ingu- £ 18.
35. Ijeli Yokuhlanza I-Avène
Ubucayi buka-Avène nokho ukwelapha okuphumelelayo kunomthelela ophumuzayo ikakhulukazi esikhumbeni esicasuka kalula.
Ngenxa yemiphumela epholisayo yamanzi esiphethu esishisayo kanye nokuzinikela ekusizeni abantu abahlushwa ukuzwela.
Ukulandisa kuqala ngo-1736 edolobheni elincane eliseningizimu yeFrance. Ngenkathi ihhashi lika-Marquis de Rocozel liqala ukukhwehlela okungapheli futhi lalapheka ngemva kokucwiliswa okumbalwa emfuleni i-Orb.
Yile ndlela izimfanelo ezipholile zamanzi e-Avène ashisayo atholakala ngayo. Futhi selokhu lifakiwe kukho konke ukwakheka komkhiqizo.
Futhi, lokhu i-gel ehlanzekile enezinhloso ezimbili, elungele umzimba nobuso, kusha eqoqweni. Ikakhulukazi (kepha hhayi kuphela) ilusizo esikhunjeni esinamafutha nesinesici ngenxa yokusebenza kwaso ngokomtholampilo ekuqedeni ukungcola nokwehla kwe-sebum eyeqile.
Futhi, inesisekelo esingenayo insipho esicetshiswe ngokugxila okuphezulu kwesiginesha samanzi ashukumisayo nasentofontofo asetshenziswayo, okusiza ngokubambisana ukukhuthaza i-epidermis ehlanjululwe nangaphezulu.
Iqukethe izithako ezitholakala ngokwemvelo ezingamaphesenti angu-84 futhi ifakwe yinkimbinkimbi ye-Comedoclastin esebenzayo nenegunya lobunikazi.
Ngaphandle kokucasuka noma ububomvu, ukwakheka okubolayo kungashiya isikhumba sizizwe sihlanzekile, sisha futhi sihlanzekile.
36. I-La Bella Figura I-Clean Slate Rinsable Cleansing Concentrate
Leli bhamu elinokhilimu lihlanza isikhumba ngokujulile ngaphandle kokulikhumula. Yakhiwe kakhulu ngezinto eziphilayo futhi yadalwa inkampani ezinikele ekunakekeleni isikhumba nobuhle obuluhlaza.
Leli bhalsamu linikeza ukuhlanzwa okuphelele kanye nokukhanya okunempilo, okunamanzi. Kuyinto emnandi njengesula imaski yokusakaza yangaphambi kokugeza.
37. Q + I-Peppermint Daily Cleanser
Lokhu isihlanza esifakwe i-mint iyindlela emnandi yokuqala usuku 'lokungaphumuli' ngenxa yezici zalo zokuqinisa kanye nezici ezivuselelayo.
Kungumkhiqizo othambisa kakhulu futhi obucayi owenzelwe ukuhlonipha ibhalansi yemvelo yesikhumba sakho.
Futhi, ayinabo utshwala (ngakho-ke ngeke iphelelwe amanzi emzimbeni), inobungani be-vegan, futhi igcwele izinto ezinamandla zezitshalo. 'Ukuqina' kwesikhumba kungumgomo omkhulu wale nkampani yaseBrithani ehlanzekile futhi egxile kakhulu ekusetshenzisweni kwayo.
Lokhu kubonakala ngendlela yayo eqondile nokusetshenziswa kwezinto ezilwa nokuvuvukala, ezisebenzisa amaphesenti angama-98.2 amaphesenti wezinto ezitholakala ngokwemvelo.
Uwoyela weqabunga le-Peppermint, nezinzuzo zalo zemvelo zokuhlanza nokuhlasela kwama-antibacterial on amabala, kuyahola, kusekelwa yi-coco sulfate (ikhemikhali elitholakala kumafutha acid kawoyela kakhukhunathi).
Futhi, njengenye indlela ye-SLS (ikhemikhali esetshenziselwa ukunikeza ubuso bugeza i-lather), engabangela ukoma nokucasuka.
Ilungele zonke izinhlobo zesikhumba, kusuka kowoyela kuya komile, ukuhlanganiswa ukuzwela, futhi kusekelwe emanzini kunowoyela. I-125ml ibiza u-£7.50.
38. Amachibi Amadoda Amandla Aqhakazile Okulwa Nobunzima Ukugeza Ubuso
IPond's Men Energy Bright Face Wash kuyinto ekhanyayo yokugeza ubuso yamadoda.
Ihlanza isikhumba sakho ngokujulile futhi isishiye sihlanzekile futhi sivuselelwe ngokususa ukungcola, uwoyela, nokungcola. Iphinde iqede ngokuphumelelayo ukungcola nokungcola, isuse amangqamuzana esikhumba afile futhi ibuyisele ukukhazimula okusheshayo esikhumbeni.
Ngaphandle kwalokhu, ukumnika kwe-menthol kuyinikeza ukuqabuleka okushoshozelayo nokubukeka okunamandla. Futhi, ukukhishwa kukabhontshisi wekhofi kanye ne-menthol yokupholisa kuyahlangana ukuze kwakhe amandla angu-2-in-1.
Futhi, okukhishwe kukabhontshisi wekhofi kunikeza ukukhanya okusheshayo. Futhi, i-Menthol ivuselela isikhumba sakho ngokusipholisa phansi.
Isihlanzi sobuso esinezinto ezilwa nobuthuntu kanye nezicwebezelayo. Futhi isusa insila, amafutha, nobuthuntu ebusweni.
39. I-Homme Face Daily Ukugeza Ubuso
Lo mkhiqizo waklanywa ngesikhumba samadoda engqondweni, njengoba igama liphakamisa. Lesi sihlanzisi sokupholisa siyaphumuza, sikwenza kube ukukhetha okuhle kulabo abashefa njalo.
Futhi, inomphumela opholile esikhumbeni ngenxa yokwengezwa kwe izihlahla zetiye kanye ne-lavender. Lesi isihlanzi esihle kakhulu sanoma ngubani ofuna ukugeza okungathathi hlangothi kwansuku zonke ngentengo efanelekile.
40. Isazi Sama-Alchemist Esikhulile iGel Cleanser
I-Alchemist ekhulile inikeza "uhlelo" lobuhle bemvelo nobuphelele. Kokubili izisindisi zesikhumba ezisematheni nezidlekayo ezihlanganisa izinto ezisebenzayo eziboniswa ukukhuthaza impilo yamangqamuzana esikhumba.
Ngokwazi nokuhlonipha iqiniso lokuthi inhlalakahle nobuhle buhlangene ngokungenakuphikwa.
I-Gentle Gel Facial Cleanser evela enkampanini imnene esikhunjeni esizwelayo, enenhlanganisela ethambile yezindikimba zezitshalo ezivumela i-epidermis (ungqimba olungaphezulu lwesikhumba) ukuphefumula ngaphandle kokuhlubula noma ukuphazamisa izingqimba ezijulile.
Ama-rose petals acindezelwe kakhulu (aphezulu kuma-polyphenols) axubene ne-chamomile, i-bergamot, ne-willow bark ukusiza izimbotshana eziqine kakhulu nokusabalalisa amabala amnyama.
I-Aloe vera (ene-polysaccharides ephezulu) ikhulula ukucasuka, inciphisa ububomvu, futhi ikhulise ukunwebeka nokukhanya.
Umkhiqizo we-unisex gel-to-foam uhlanza futhi upholise, unikeza imiphumela yokuguga, futhi ifanele zonke izinhlobo zesikhumba. Kodwa-ke, ingakhethwa ngabesilisa ngenxa yobuhle bayo besitayela se-apothecary. 200ml nge-£31
Amafutha Entshebe Yamadoda
Izinto Ezimangalisayo okufanele uzenze eTennessee
Amabhishi ahamba phambili emhlabeni
Kulula ukufinyelela endaweni yokuhlanza elimaza kakhulu. Mhlawumbe uke wafuna lokho kuzwa “okuqinile”, lowo muzwa wokuthi isikhumba sakho sihudulwa phakathi kwezihlathi zakho njengoba usihlikihla.
Kodwa lokho kuwuphawu olunegethivu; kusho ukuthi okokuhlanza kwakho kunokhahlo ngokweqile futhi kuzolimaza isikhumba sakho ngokuhamba kwesikhathi. Lezi zinketho, ngakolunye uhlangothi, zintekenteke njengewundlu.
Ziyahlukahluka kusuka ekususeni ohambweni kuya ekugezeni ubisi, izimpuphu zokuhlanza ipore kuya ezimangalisweni zokususa uwoyela. Ngenxa yalokho, kungenzeka kube khona inketho lapha elungele uhlobo lwesikhumba sakho, ukususa ukungcola kumenzi wakho wemali.
Sicela ukhululeke ukushiya amazwana futhi uthande leli khasi. Futhi, ungatshela abangane bakho nomndeni wakho ngakho.
Tags:best ukugeza ubuso amadoda inhlanganisela isikhumba, best face wash for amadoda isikhumba esomile, best ukugeza ubuso amadoda in india, ukugeza ubuso okungcono kwesikhumba sabesilisa esinamafutha, best ukugeza ubuso amadoda nezinduna, amadoda amahle kakhulu ageza 2021, ukugeza ubuso kwamadoda okuhamba phambili ngezinduna namabala amnyama, top 10 ukugeza ubuso amadoda
Yini i-Eczema? Ukushuka kwe-Eczema- Ingabe Kuyasiza?
Umhlahlandlela Olula Wendlela Yokubhekana Namamaki Wokunwebeka Usebenzisa iVaseline
Izindlela Ezi-10 Zokusebenzisa Imbewu Ye-Avocado Okufanele Uyazi